कति लामो समयसम्म यौन सम्पर्क राख्नु राम्रो ? - Everest Dainik - News from Nepal
कति लामो समयसम्म यौन सम्पर्क राख्नु राम्रो ?
बदलिँदो जीवनशैलीको प्रत्यक्ष असर जीवनका विभिन्न पक्षहरूमा देखा पर्न थालेको छ । आजभोलीको व्यस्त जीवनशैलीका कारण स्वस्थ खानपान र रहनसहन बनाइराख्नु चानचुने कुरो होइन । खानपिनमा असंतुलन, भरपूर निद्राको कमी र शारीरिक तथा मानसिक थकानको कारण थुप्रै रोगहरूले घेर्ने खतरा बढ्दै गइराखेको छ ।
एकातिर तनावपूर्ण जीवनशैलीका कारण पुरुषहरूमा समस्या देखा परिराखेको छ भने अर्कोतिर महिलाहरूमा पनि कमेक्षाको कमी र कामेक्षा भएका बेला पनि पुरुष साथीबाट सन्तुष्ट हुन नसकेर कुण्ठाग्रस्त हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।
शोधमा संलग्न चिकित्सकहरूले शारीरिक थकान एवं मानसिक तनावका कारण शारीरिक सम्बन्धको भरपूर आनन्द उठाउन नसक्ने जोडीहरूले चिकित्सकीय परामर्श लिनुपर्ने सल्लाह दिएका छन् ।